Baarlamaanka Maamul-goboleedka Puntland oo Kalsoonida kala noqday Xukuumadda Madaxweyne Cabdiweli | Berberanews.com
Home WARARKA Baarlamaanka Maamul-goboleedka Puntland oo Kalsoonida kala noqday Xukuumadda Madaxweyne Cabdiweli
Baarlamaanka Maamul-goboleedka Puntland oo Kalsoonida kala noqday Xukuumadda Madaxweyne Cabdiweli
Garoowe(Berberanews):- Baarlamaanka Maamul-goboleedka Puntland ee Soomaaliya, ayaa fadhi aan caadi ahayn oo ay Salaasadii Maanta ku yeesheen xaruntooda Garoowe, ku kala diray oo Kalsoonida kala noqday Xukuumadda Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo ay ku eedeeyeen inay noqotay Xukuumad ka aan xaaladda Puntland ku jirto ka saari karin oo ku fashilantay inay si habboon u shaqayso.
Golaha Xukuumadda Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, ayey Xildhibaannada Baarlamaanku ku eedeeyeen inay noqotay mid fadhiid ah oo aan waxba ka qaban karin baahida Bulshada Puntland, hawshana sii wadi karin, waxaanay u qaadeen Codka Kalsoonida, isla markaana aqlabiyadda Mudanayaasha Wakiilladu waxay u codeeyeen inay kalsoonida kala noqdeen Xukuumaddaas. Waxaanay u soo jeediyeen Madaxweyne Gaas inuu soo dhiso Xkukuumad tayo leh oo tiro yar.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, ayaa Cod geliyey Ajnadaha Horyaallay fadhigan Maanta sida loo kala horraysiinayo, waxaana u codeeyey in Mooshinka lagu bilaabo 47 Xildhibaan. Xildhibaanada hortooda ayuu Guddoomiyuhu ka akhriyey Mooshinka iyo sababaha ay Xildhibaannadu u cuskadeen oo ah in Golaha Wasiirradu ku fashilmeen shaqadii loo igmadey sida Amniga, Hormarinta Dhaqaalaha, bixinta Xuquuqda Shaqaalaha iyo wax-ka-qabashada Duruufaha Dadka iyo Deegaannada Puntland inta-ba.
57 Xildhibaan, ayaa fadhiyey Fadhiga Maanta, waxaana Mooshinka ka hadley 20 Xildhibaan ka hor intaan codeynta la gelin Moshinka. Xildhibaannada ayaa Xukuumadda ku eedeeyey wax-qabad la’aan, Amniga oo faraha ka baxay, Sicir-barar, Mushaharka oo aan la bixin iyo Musuqmaasuq. Markaa ka dib waxa la bilaabay codaynta, 47 Xildhibaan ayaa u codeeyey in Xukuumadda Gaas kalsoonida lagala laabto, hal Xidhibaan oo keliya ayaa ka soo horjeestey, 9 Mudane, ayaa ka aammusay, Guddoomiyuhuna muu codayn, waxaanu ku dhawaaqay inay ansax tahay in kalsoonida lagala noqday Xukuumadda.
Geesta kale, Madaxweynaha Maamul-goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo isna Maanta Madaxtooyada Garoowe Warbaahinta kula hadlay, ayaa sheegay inuu soo dhawaynayo go’aanka Baarlamaanka, maaddaama oo uu yahay Qodob Sharci oo Dastuurka Puntland awood u siiyey Baarlamaanka haddii ay saluugaan Xukuumadda inay kalsoonida kala noqdaan.
Madaxweyne Gaas waxa uu sheegay inuu sida ugu dhakhsaha badan u soo dhisi doono Xukuumad cusub oo tayo leh oo ka jawaabta baahiyaha Bulshada Puntland iyo aragtida horumarka ku salaysan ee rabitaanka Baarlamaanka, maaddaama oo ay Xildhibaannu yihiin kuwo Bulshada Wakiil ka ah.
Qaabkii uu Fadhiga Baarlamaanka Maamulka Puntland ku furmay Saaka, qaabka Codaynu u dhacday, Xildhibaannada diiday, kuwa ka aammusay iyo Tirada ansaxday ee Kalsoonida lagagala noqday Golihii Wasiirrada Puntland, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan Hoose ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-
Previous articleMadaxweyne ku-Xigeenka Somaliland oo xadhiga ka Jaray Laamaha Dahabshiil Bank International iyo Damal Hotel ee Berbera.
Next articleWaddamada Cunaqabataynta geliyay Qatar oo debecsanaan muujiyay